WASAARADA CADAALADDA, ARIMAHA DIINTA, DASTUURKA IYO DHAQANCELINTA PUNTLAND OO GAROOWE KA DAAH-FURTAY KULAN KU SAABSAN DASTUURKA KMG AH EE SOOMAALIYA – Wasaaradda cadaaladda Puntland
wasaaradda Cadaaladda, Arrimaha Diinta iyo Dastuurka Puntland ayaa maanta Garoowe ku qabatayKulan ku saabsan ka doodista iyo kala tashiga bulshada ee arrimaha Dastuurka dowladda Federaalka Soomaaliya.
Kulanka waxaa ka qeyb-galay wasiiru-dowlaha wasaaradda Cadaaladda, Arrimaha Diinta iyo Dastuurka Puntland Maxamed Rooble Cabdi, agaasimaha Waaxda Dastuurka ee wasaaradda,Yuusuf Ibraahim Saalax, aqoonyahanno, dhalinyaro, haween iyo bulshada qeybaha kala duwan ee bulshada.
Kulanka oo mudda laba maalmood ah socon doona ayaa lagu soo bandhigi doona la tashiyo ku aaddan dib u-eegista qodobada 50-54-aad ee Dastuurka KMG ah ee Soomaaliya, cutubyadaasi oo ka hadlaya awoodaha qeybsiga dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka.
Cadaaladda, Arrimaha Diinta iyo Dastuurka Puntland, Maxamed Cabdi Rooble Ilyaas oo daah-furay kulanka ayaa sheegay in laba qodob oo waaweyn kulanka looga doodi doono, kuwaasi oo kala ah; sida Dastuurku u kala qeexayo awoodaha dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale qeybsiga khayraadka heer Federaal iyo heer dowlad goboleed.
Wasiirka ayaa sheegay in labadaasi qodob ay xuddun u yihiin khilaafka dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada, islamarkaana haddii aan laga heshiin uusan dhammaystirmi Karin Dastuurka KMG ee Soomaaliya.
Wasiira ayaa ka qeyb-galayaasha kulanka, waxa uu ku boorriyay in ay maskaxdooda si fiican u tuujiyaan, ayna soo bandhigaan fikirka iyo aragtiyaha ay ka qabaan cutubyada horyaalla ee Dastuurka KMG ee Soomaaliya, si talo wax ku ool ah uga soo baxdo.